Mitongo yevaIsraeri (1-31)
Pamusoro pekuba (1-4)
Pamusoro pekukanganisa zvirimwa zviri mumunda (5, 6)
Pamusoro pekuripa muridzi wezvinhu (7-15)
Pamusoro pekunyengedza mhandara (16, 17)
Pamusoro pekunamata uye kugarisana zvakanaka (18-31)
22 “Kana munhu akaba mombe kana kuti gwai ouraya kana kuti otengesa, anofanira kuripa mombe yacho nemombe shanu, uye gwai racho nemakwai mashanu.+ 2 (“Kana mbavha+ ikawanikwa ichipaza, yobva yarohwa, yofa, aiuraya wacho haana mhosva yekudeura ropa. 3 Asi kana zvikaitika zuva rabuda, aiuraya wacho ane mhosva yekudeura ropa.) “Munhu aba anofanira kuripa. Kana asina chinhu, anofanira kutengeswa kuti aripe zvinhu zvaakaba. 4 Kana akawanikwa aine chinhu chaakaba chiri chipenyu, ingava mombe kana dhongi kana gwai, anofanira kuripa zvapetwa kaviri. 5 “Kana munhu akaendesa zvipfuwo zvake kunofura kumunda wembesa kana wemizambiringa ozvirega zvichidya munda wemumwe munhu, anofanira kuripa nezvakanakisisa zvemunda wake wembesa kana kuti zvakanakisisa zvemunda wake wemizambiringa. 6 “Kana moto ukatanga, wopararira uchipisa makwenzi, uye wopisa zviyo zvakachekwa kana kuti zvisati zvachekwa kana kuti munda, munhu abatidza moto wacho anofanira kuripa zvinenge zvatsva. 7 “Kana munhu akachengetesa mumwe wake mari kana kuti zvimwe zvinhu uye zvobiwa zviri kumba kwake, kana mbavha yacho ikabatwa, inofanira kuripa zvapetwa kaviri.+ 8 Kana mbavha yacho ikasawanikwa, muridzi wemba anofanira kuunzwa pamberi paMwari wechokwadi+ kuti vaone kana asina kuisa ruoko rwake pazvinhu zvemumwe wake. 9 Panyaya dzese dzekuti munhu anowanikwa aine zvinhu zvisiri zvake, zvakadai semombe, dhongi, gwai, chipfeko, kana chinhu chero chipi zvacho chakarasika chaangataura nezvacho achiti, ‘Ndechangu!’ vese vari vaviri vanofanira kuuya nenyaya yavo kuna Mwari wechokwadi.+ Anenge anzi naMwari ane mhosva anofanira kuripa mumwe wake zvakapetwa kaviri.+ 10 “Kana munhu akachengetesa mumwe wake dhongi, kana mombe, kana gwai, kana chimwewo chipfuwo uye chofa kana kuti choremadzwa kana kuti chotinhwa pasina ari kuona, 11 akachengeteswa wacho anofanira kupika pamberi paJehovha kuti haana kutora zvinhu zvemumwe wake; uye muridzi wacho anofanira kuzvibvuma. Akachengeteswa wacho haafaniri kuripa.+ 12 Asi kana akabirwa chipfuwo chacho, anofanira kuripa muridzi wacho. 13 Kana chakabvamburwa nechikara, anofanira kuuya nacho kuti chive uchapupu. Haafaniri kuripa chinhu chakabvamburwa nechikara. 14 “Asi kana munhu akakwereta chipfuwo chemumwe wake, choremadzwa kana kuti chofa, chisiri mumaoko emuridzi wacho, munhu wacho akakwereta anofanira kuripa. 15 Kana muridzi wacho ainacho, haafaniri kuripa. Kana chiri kushandiswa chichiita zvekubhadharwa, mari yakabhadharwa yacho ndiyo inoripa. 16 “Kana munhu akanyengedza mhandara isati yavimbiswa kuroorwa, orara nayo, anofanira kumubvisira roora kuti ave mudzimai wake.+ 17 Kana baba vake vakaramba naye zvachose, munhu wacho anofanira kuripa mari inoenzanirana neyeroora. 18 “Usarega muroyi wechikadzi ari mupenyu.+ 19 “Munhu wese anorara nemhuka anotofanira kuurayiwa.+ 20 “Munhu wese anopa chibayiro kune vamwe vanamwari kunze kwaJehovha anofanira kuparadzwa.+ 21 “Usabata mutorwa zvisina kunaka kana kumudzvinyirira,+ nekuti imi maimbova vatorwa munyika yeIjipiti.+ 22 “Musatambudza chirikadzi kana kuti nherera.+ 23 Kana mukaitambudza, iyo ikandichemera, chokwadi ndichanzwa kuchema kwayo;+ 24 ndichatsamwa kwazvo, uye ndichakuurayai nebakatwa, madzimai enyu achava chirikadzi, uye vanakomana venyu vachava nherera. 25 “Kana ukakweretesa mari kumurombo ari pakati pevanhu vangu wauri kugara naye, usaite semunhu wechimbadzo. Usaita kuti akudzorere mari yacho yabereka.+ 26 “Kana ukapa munhu chikwereti wofanobata nguo yake,+ unofanira kuidzorera kwaari zuva risati ravira. 27 Nekuti ndiyo yega yaainayo, yekuti afukidze muviri wake; acharara akafugei?+ Paachandichemera, ndichatoti ndimunzwe, nekuti ndine tsitsi.*+ 28 “Usatuka Mwari+ kana kutuka jinda riri pakati pevanhu vako.*+ 29 “Usazengurira kupa zvibayiro kubva pazvibereko zvako zvakawanda nezvinofashukira zvechisviniro* chako.+ Unofanira kundipa dangwe revanakomana vako.+ 30 Izvi ndizvo zvaunofanira kuita nemombe yako uye gwai rako:+ Icharamba iri pamwe chete naamai vayo kwemazuva manomwe. Pazuva rechi8 unofanira kundipa.+ 31 “Munofanira kuva vanhu vatsvene kwandiri,+ uye hamufaniri kudya nyama yechinhu chakabvamburwa kusango nechikara.+ Munofanira kuikandira imbwa.
^ Kana kuti “ndine tsiye nyoro.”
^ Kana kuti “mutongi ari pakati pevanhu vako.”
^ Kureva, zvisviniro zvemafuta nezvewaini.